Kitra – «THB ligue des champions 2017» : tafita ny Elgeco sy ny Cnaps ary ny Hzam sy ny Cosfa | NewsMada
Kitra – «THB ligue des champions 2017» : tafita ny Elgeco sy ny Cnaps ary ny Hzam sy ny Cosfa
Fantatra avokoa ireo ekipa hiatrika ny fiadiana ny dingana farany “Poule des As”, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “THB ligue des champions”, taranja baolina kitra.
Vita avokoa ireo fifanintsanana isam-bondrona, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “THB ligue des champions 2017”, taranja baolina kitra. Tafakatra amin’ny “Poule des As”, tany Fianarantsoa ireo ekipan’ny ligin’Analamanga roa dia ny Cosfa sy ny Elgeco Plus. Manohy ny lalany ihany koa tany Mahajanga, ny Cnaps Sport, avy any Itasy sy ny Hzam Amparafaravola.
Na izany aza, mbola andrasana amin’ny fivorian’ny komity mpitantana eo anivon’ny federasioina ny fanamafisana “homologation”-n’ireo ekipa tafita ireo.
Voahaja tanteraka ny lojika, teo amin’ny vokatra farany ho an’ity fifaninanam-pirenena ity, satria nivoaka ho mpandresy avokoa ireo ekipa lehibe. Anisan’ireny, ny Cnaps Sport, izay nandresy ny Hzam, tamin’ny isa mazava, 5 no ho 0. Tetsy ankilany, resin’ny Ajesaia, tamin’ny isa 4 no ho 0 kosa ny FC Maeva. Tafita ihany anefa ry zareo Amparafaravola, na resin’ny Cnaps aza satria nanantombo teo amin’ny “goal average”, raha oharina amin’ny Ajesaia.
Hiditra amin’ny “Poule des As”
Tany Fianarantsoa indray, resin’ny Cosfa, tamin’ny isa 3 no ho 1 ihany koa ny Elgeco Plus, ary ny Top Dom, lavon’ny RTS Jet Mada, tamin’ny isa 2 no ho 1. Io faharesen’ny Top Dom io, no nahafahan’ny Elgeco Plus manohy ny diany satria nijanona teo amin’ny isa 7 ny Top Dom, raha 10 kosa ny an’ny Elgeco Plus.
Tetsy ankilany, nahazo ny fandresena fanindroany ho azy ny FC Zanakala, rehefa nandavo ny FC Angele, tamin’ny isa 3 no ho 0, saingy efa tsy manana herijika ho tafita intsony. Raha tsy misy ny fiovana, hotanterahina ny 22 – 29 oktobra, ho avy izao, ny “Poule des As”, izay hatao lalao mandroso sy miverina. Andrasana kosa ny kianja hanatontosana izany.
Une réponse à "Kitra – «THB ligue des champions 2017» : tafita ny Elgeco sy ny Cnaps ary ny Hzam sy ny Cosfa"
RANAIVO FRANCO 11/10/2017 à 16:29
ataovy aty Majunga eeee.sady aty mahazo olona fona ny baolina kitra an.